GoldenBird စျေး - အွန်လိုင်း XGB ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို GoldenBird (XGB)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ GoldenBird (XGB) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ GoldenBird ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ GoldenBird တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
GoldenBird များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
GoldenBirdXGB သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000168GoldenBirdXGB သို့ ယူရိုEUR€0.000142GoldenBirdXGB သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000129GoldenBirdXGB သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000153GoldenBirdXGB သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00152GoldenBirdXGB သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00106GoldenBirdXGB သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00375GoldenBirdXGB သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.000629GoldenBirdXGB သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000224GoldenBirdXGB သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000235GoldenBirdXGB သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00376GoldenBirdXGB သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0013GoldenBirdXGB သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.000911GoldenBirdXGB သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0126GoldenBirdXGB သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0283GoldenBirdXGB သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00023GoldenBirdXGB သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000254GoldenBirdXGB သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.00523GoldenBirdXGB သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00117GoldenBirdXGB သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0178GoldenBirdXGB သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.199GoldenBirdXGB သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.0644GoldenBirdXGB သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0124GoldenBirdXGB သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.00465
GoldenBirdXGB သို့ BitcoinBTC0.00000001 GoldenBirdXGB သို့ EthereumETH0.0000004 GoldenBirdXGB သို့ LitecoinLTC0.000003 GoldenBirdXGB သို့ DigitalCashDASH0.000002 GoldenBirdXGB သို့ MoneroXMR0.000002 GoldenBirdXGB သို့ NxtNXT0.0123 GoldenBirdXGB သို့ Ethereum ClassicETC0.00002 GoldenBirdXGB သို့ DogecoinDOGE0.0495 GoldenBirdXGB သို့ ZCashZEC0.000002 GoldenBirdXGB သို့ BitsharesBTS0.00644 GoldenBirdXGB သို့ DigiByteDGB0.00576 GoldenBirdXGB သို့ RippleXRP0.000582 GoldenBirdXGB သို့ BitcoinDarkBTCD0.000006 GoldenBirdXGB သို့ PeerCoinPPC0.000547 GoldenBirdXGB သို့ CraigsCoinCRAIG0.0756 GoldenBirdXGB သို့ BitstakeXBS0.00707 GoldenBirdXGB သို့ PayCoinXPY0.0029 GoldenBirdXGB သို့ ProsperCoinPRC0.0208 GoldenBirdXGB သို့ YbCoinYBC0.00000009 GoldenBirdXGB သို့ DarkKushDANK0.0532 GoldenBirdXGB သို့ GiveCoinGIVE0.359 GoldenBirdXGB သို့ KoboCoinKOBO0.0377 GoldenBirdXGB သို့ DarkTokenDT0.000154 GoldenBirdXGB သို့ CETUS CoinCETI0.479